GIMP ... meesha haa iyo halka mararka qaarkood. | Laga soo bilaabo Linux
“Lix addoon oo daacad ah ayaa i baray inta aan ogahay;
magacyadoodu waa sida, goorma, goobta, maxay, cidda iyo sababta. "
Rudyard Kipling (1865-1936) Suugaanyahan Ingiriis ah
Way dhacday, marar badan, in taageerayaasha barnaamijyada bilaashka ah ee ay taageeraan sawirrada cajiibka ahi ay isku dayaan inay muujiyaan, si niyad wanaagsan shaki la'aan, in GIMP waa aalad aad u fiican laakiin sababo aan la garaneyn ayaa waxaa quudhsaday warshadaha naqshadeynta garaafka.
Ilaa hadda barta waa mid xiiso leh, maxaa yeelay iyagu badankood way saxan yihiin: qayb weyn oo ka mid ah bulshada naqshadeynta garaafka ayaan ka warqabin jiritaanka GIMP kuwa isaga yaqaanna kuma sifeynayaan mudnaan ku filan isaga inuu si joogto ah u beddelo Adobe Photoshop.
Dhibaatadu waxay bilaabmaysaa markay xagjiriintu soo dhexgalaan si ay u xaqiijiyaan "Qeyb iyo shaki la'aan" in naqshadeeyayaasha garaafku aysan isticmaalin GIMP maxaa yeelay waxaan nahay fudud "Fotochoperos" iyo in awoodeena aqooneed aysan dhaafsiisneyn adeegsiga miirayaasha asalka ah Photoshop. Xaqiijinta waxaas oo kale waxay ka bilaabi kartaa hal shay oo keliya: iska indha-tir waxa farqiga u dhexeeya iyo isku ekaanshaha u dhexeeya hal xirfad iyo mid kale, ka hor intaanan u dhaqaaqin inaan isku dayo inaan sharaxaad ka bixiyo waa inaan si cad u caddeeyaa in GIMP Waa qalab aad u fiican oo u adeegi kara sawir-qaade gebi ahaanba iyo boos celin gaar ah naqshadeeye muuqaal leh. Markaan sidaas iri, aan u gudubno inaan isku dayno inaan sharaxno waxa midi sameeyo iyo ka kale uu sameeyo.
1 Masaalka ciyaaryahanka jazz iyo kooxda muusikada
2 Kuhadlaya lacag
Masaalka ciyaaryahanka jazz iyo kooxda muusikada
Sawir gacmeedku wuxuu la mid yahay guitarist jazz oo fasiraadda mawduuca Yesterday Waxay inta badan kuxirantahay awoodiisa farsamo, laakiin tayadiisa tarjumaadeed waxay ka muuqataa awoodiisa hagaajinta dareenka. Waa maxay tan macnaheedu? In dhagaystayaashu u sacabiyaan oo ay qaddariyaan ayaa ah "Dareen" in gitaaristu dhigo markuu turjumayo heesta waana mida siinaysa qiime turjumaad. Halkan waxay ku saabsan tahay muujinta dareenka.
Dhanka kale, muusikiisteyaasha muusikada heesaha ayaa sidoo kale awood u leh tarjumaadda Yesterday laakiin, si ka duwan sida loo yaqaan 'jazz player', dabeecad wanaaggu wuxuu ku jiraa adeegga wadajirka -kooxda orchestra- qof walbana waa inuu kaqeybqaataa daqiiqadaha saxda ah, isagoon u oggolaan boosaska shaqsiyaadka hagaajinta. Mid kasta oo iyaga ka mid ah waxaa lagu xukumaa tilmaamo loo qoondeeyay, hal qoraal oo meesha ka baxsan in kasta oo aan hab-dhiska ka ahayn loo arko qalad. Tani waa sida naqshadeeye a graphic u shaqeeyaa.
"Si aad u wanaagsan Tina... iyo maxay taasi ka leedahay qofka mid awood u leh inuu isticmaalo GIMP 100% ma ahan tan kale? " way yaabi doonaan. Hagaag markaa aan tusaale kale qaadanno:
Ka soo qaad hadduu macmiil i amro calaamadda cabbitaanka carruurta ee jilicsan, shaqada waxaa lagu daabici doonaa siddeed faashad gudaha polypropylene iyada oo loo marayo jilicsanaan oo wuxuu rabaa inaan qaado sawirka laba caruur ah oo faraxsan.
Aynu dhinac dhigno dhammaan faahfaahinta sharciga ah ee calaamaddu ay tahay inay ku jirto si diiradda loo saaro dhinaca garaafka:
Sawirka sawirada ayaa si fudud u isticmaali kara GIMP si loo abuuro hal ama dhowr sawir oo wiilasha ah. GIMP waxay leedahay qalabka lagama maarmaanka ah -burush, lakabyo iyo saameyn gaar ah- sidii loo qaban lahaa shaqo heer sare ah iyo, xaaladdan oo kale, macno malahan inuu maareynayo nidaamka midabka CMYK maadaama illaa iyo heerkan la joogo ay habboon tahay in laga shaqeeyo RGB, taas oo GIMP sifiican ayuu uqabtaa. Sida jazz player, sawir qaadaha wuxuu isku dayi doonaa inuu muujiyo dareen ama dabeecad, xaaladdan farxadeed, sawirkana waa lagu ansixin doonaa taas.
Marka sawirka la ansixiyo, wuxuu u gudbaa gacmaha naqshadeeyaha garaafka kaasoo, ka hor inta uusan u dhigin naqshadeynta calaamadda, waa inuu hubiyaa in sawirka si sax ah loogu daabici doono sideed jijiyeyaal jilicsan, markaa wax ka beddel faylka GIMP si loo kala saaro midabada siddeed kanaal -kuwa loo isticmaali doono daabacaadda- si sawirka daabacan u muuqdo mid u fiican sida midka dhijitaalka ah. Halkan dhibaatadu way ka bilaabmaysaa ... GIMP ha wadin midabyo tixraac ah oo loogu talagalay maqaarka maqaarka markaa shaqada waa in lagu qabtaa softiweer awood u leh qabashadiisa. Sida kooxda muusikada oo kale, naqshadeeyeha garaafka ah kuma fekerayo gudbinta dareenka ujeeddo asaasi ah, laakiin wuxuu dhigaa aqoontiisa si uu u xalliyo dhibaatada marka loo eego wax walba: in sumadda daabacan ay u muuqato mid wanaagsan. Taasna waa inaad raacdaa tilmaamaha tilmaamaya habka shaqada loo daabacayo.
Waxa ay tahay inaad aragto, dareen la'aan, taasi waa hubaal GIMP Waa qalab weyn oo loogu talagalay kuwa horumarinaya shaqooyinka ujeeddadoodu tahay inay noqdaan taranka dhijitaalka ah, laakiin kuwa loogu talagalay in lagu daabaco iyadoo la adeegsanayo nidaamyada analogga ah, had iyo jeer ma shaqeyso.
Halkan kiisku waa wax soo saar badan maxaa yeelay, ugu yaraan aniga, ma arko dacwadda oo adeegsanaysa GIMP in la sameeyo nus shaqada ka dibna loo haajiro Photoshop in wax laga qabto gudaha GIMP xaddidan yahay ama uusan sameyn karin.
Waxaan rajeynayaa in bandhigan aan loo qaadanin dhaliil arxan darro ah GIMPTaas bedelkeeda, aniga waxay ila tahay bedel aad u fiican oo loo isticmaali karo sameynta nooc kasta oo sawir ah waxaana loo isticmaali karaa warshadaha naqshadeynta garaafka illaa iyo inta aan ka warqabno xaddidaadkeeda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » GIMP ... meesha haa iyo halka mararka qaarkood.
Waan kugu raacsanahay, waxaan ahay naqshadeeye garaaf oo kaliya mashaariicdeyda waxaan u isticmaalaa softiweer bilaash ah, shaqadayda waxaan u adeegsanaa lahaansho. Waxaan xasuustaa mar aan qorsheeyey shiraac inkscape ah oo aan si farxad leh ugu diro si aan u daabaco (laga bilaabo xudunta png, maxaa yeelay ma jiro qaab inkscape dhoofinaya jeexjeexida la aqoonsan yahay, kaliya tiff laakiin si fiican uma dhoofiso inkscape) si fiican kiisku waa in midabbo leh in la daabaco, waxay u muuqdeen wax laga naxo !! laakiin maxaa la yidhaa Naxdin! musiibo, haddii qof naqshadeeye yahay, waan ogahay inay i fahmayaan markay shaqadu noqon weydo sida ay iyagu rabaan. Iyada oo ay taasi jirto hadana maan dhiibin oo ma anoo dejinay astaamaha midabbada labbiska iyo 'corel' iyo 'tiff' halkii aan ku diri lahaa cmyk waxaan u diray rgb, taasna waxay isiisay natiijo wanaagsan oo ku saabsan daabacaadda.
Marka la soo koobo, gimp iyo inkscape labaduba waxay ku fiican yihiin shaqada dhijitaalka ah iyo kuwa daabacan mooyee haddii aysan lahayn kala-goyn midab ah sida daabacaadda dhijitaalka ah waa ikhtiyaar wanaagsan, laakiin haddii shaqo loo diro in la dheellitiro, haddii aysan ka shaqeyn faylka, waa tan ugu xun ...
Iyo sida Tina u dhahdo, faalladaydu maaha dhaliil aan naxariis lahayn, laakiin waa qodobbo ay tahay in barnaamijyadan bilaashka ah lagu hagaajiyo.
Dhab ahaan, mid ka mid ah dhibaatooyinka InkScape si sax ah ayeyna ula jaanqaadi karin yahanHaa, tani waa sababta oo ah waxay kaliya ku dayanaysaa luqadda dib-u-qorista maaddaama ay tahay tiknoolajiyad lahaansho oo aadan isticmaali karin. Isla sidaas ayaa ku dhacda maaraynta qaabab PDF.
Arrinta halista ah ee arrinta ku saabsan ayaa ah in labadaba Dib-u-qoris sida PDF waa hanti ay leeyihiin Adobe markaa waxaan u arkaa kiiska xoogaa adag.
Maqaal aad u wanaagsan, marwalba waan xiiseynayay mowduucan waxaadna cadeysay shaki badan.
Su'aal: Miyaad u isticmaashaa Photoshop Linux-ka Khamri ama mashiin dalwad ah, mise waxaad leedahay Windows qayb kale oo aad u wareejiso markay tahay sawir qaade? Waxaan sidoo kale xiiseynayaa inaan wax ka ogaado tan maxaa yeelay waxaan qiyaasayaa waxqabadka Photoshop ee Linux waa inuu ahaadaa mid liita lagana yaabo inuusan hayn dhamaan astaamahiisa.
Nidaamyada naqshadeynta garaafka waxaan wax walba ka qabannaa macOS X, waligeen ma isticmaalin Photoshop ka Khamrigu si aan u qabto shaqo xirfad leh, si kastaba ha noqotee waxaan sameeyay tijaabooyin qaarkood… Waxaan ku dhammaaday rajo la’aan sababtoo ah gaabiska howlaha.
Aad baad u mahadsantahay. GIMP badanaa waa igufilan yahay laakiin markaan ubaahanahay Photoshop waxaan doorbidayaa inaan ka isticmaalo Windows, waxaan qabay shaki hadii ay ii sahlanaan laheyd inaan ka isticmaalo Khamriga laakiin taas ma arko. Mar labaad mahadsanid. 🙂
Waxaan aqriyay kaliya 3 sadar waxaanan filayaa inaan kufuray ...
Isu diyaari niyad jab xoog leh HAHAHA
hahahaha waxaan leeyahay waxaan jeclaaday qoritaankeeda.
Waxaan horeyba ugasoo maray dhamaan xanuunada jacaylka ee ay tahay in laga gudbo, intaas kadib waa inaad ku baashaashaa.
Jacaylku waa bamkii ugu xumaa ka dib qaraxii atomiga ahahaha
Aniga ahaan waa waxa ugu naxdinta badan ee jira, iyo si aanan u raacin dusha sare waxaan ka tagayaa xiriiriyahan oo ay ku yaalliin laba kale oo aragtidayda lagu sharraxay
Miyaad ii sheegi doontaa inaadan waligaa khibrad fiican soo marin?
Hagaag, aniga kaliya ayaa noqday waxa ugu xun ee igu dhacay noloshayda, si daacad ah. Sababaha waxaa lagu muujiyay mid ka mid ah qoraallada
Waa maxay nasashada aad soo qaadaneysaa! Aynu aragno haddii berri aan codsado imtixaanka, ma ii sheegi kartaa waxa midabbada la tiigsanayo yihiin, cunug Courage. 😀 😀
«Cunug geesinimo leh»…. JUAZ JUAZ JUAZ !!!!! Halkaas ayaad ku siisay !!!! LOL !!!!!
taasi waxay ahayd jillaab daanka
Dhammaan wixii aan ku siiyay dugsiga ee ku saabsan naqshadeynta garaafka waxay ahayd maaddo la yiraahdo "Tifaftirka Sawirka Dijital ah", oo aanan ka qayb-gelin koorsada oo dhan maxaa yeelay macallinka ayaa ii lahaa mania aniga waad arki kartaa aqoontayda ...
Aniguna ma ihi ilmo, waxa dhacaya ayaa ah inaad da 'weyn tahay in ka badan 20 sano
Si cad, maqaalka wanaagsan ee Tina wuxuu furay 2 waji hore oo dood wadaag ah, mid kamid ah aaladaha garaafyada ee GNU / Linux iyo barnaamijyadeeda iyo dhanka kale jacaylka, kakanaanta xiriirka lamaanaha iyo da'da geesinimada.
Waan fahamsanahay xaalada si daacad ahna madaama aanan ahayn naqshadeeye garaaf ah, weligay xitaa maan jeclaan oo dugsiga sare marwalba waan kufashilaa waxkasta oo ku xidhnayd naqshadaynta, ma awoodi doono inaan ku cabiro fikrad sax ah mawduuca ehehe
Runtii waan ka helay !!! Anigu aqoon uma lihi marka ay timaado naqshadeynta garaafka, laakiin waxaan jeclaaday ujeeddada iyo sida wax ku oolka ah ee aad u horumarisay maaddada. Si daacadnimo ah, kama helin meel sidan oo kale jawaab cad oo aan laga adkaan karin oo ku saabsan mawduuca "Gimp VS Photoshop" (waa in la yiraahdo)
Sida aan u arko, dabcan mashaariicdani waxay leeyihiin waxyaabo badan oo lagu horumarin karo wixii horeyba loogu guuleystay, laakiin mudnaanta weyn ee Gimp waa in la siiyo dagaal weyn mid weyn sida Photoshop, oo ku saleysan kaliya beesheeda.
Dunida SL runti waa cajiiba oo layaab 😉
Mahadsanid kun Perseus, Waan kuugu raacsanahay; GIMP waa in lagu hagaajiyaa dhowr qodob inkasta oo ay dabcan dagaal siineyso Photoshop.
Qoraal aad ufiican, aadna xog badan.
Waxaan rajeyneynaa in GIMP ay sii wanaajinayso arrintan, haddii ujeeddadaadu tahay inaad hiigsato wadar guud oo lagu beddelo Photoshop.
Hadda waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado waxa Krita awood u leedahay
Ku jawaab muadib
Waad salaaman tahay waxaan rabay inaan wax ka weydiiyo nashqadeeyayaasha Krita, marwalba waan aqriyay in xaddidaadaha ugu weyn ee gimp heer xirfadeed ay tahay inaysan taageersaneyn cmyk iyo arinta tirada jajab halkii channel, si kastaba ha noqotee wixii aan ka fahmay inay u hogaansameyso dhinacyadaas.
Waxaan rabay inaan ogaado waxa aad naqshadeeyayaashu u maleyneysaan, haddii aad isaga taqaanid oo uu fulin karo ama uusan ku joogin heer xirfadeed. Isku mid ah Karbon oo loogu talagalay sawirada dulinka, mahadnaq iyo mahadnaq!
Waxa ugu horreeya ee la ogaado waa in barnaamijyada naqshadeynta garaafka loo qaybiyay saddex kooxood oo waaweyn:
3.-Qabashada sawirada raajada (oo ku saleysan pixels):
Karbon Waa barnaamij wanaagsan in la muujiyo, qaar badan ayaa sidoo kale u adeegsada qaabeynta maaddaama ay leedahay hanti isku-dhufasho oo si fiican loogu isticmaali karo abuuritaanka buugaag dijitaal ah ama joornaallo loo qaybin doono qaab PDF ah. Kuma talin karo inay tahay barnaamij la isku halleyn karo oo loogu talagalay soo saarista kaydinta alaabada hore.
jeeso Waa barnaamij lagu muujiyo, maahan in dib loo hagaajiyo sawirada, waxayna leedahay faa iidada ugu badan ee kiniiniyada sawir gacmeedka lagu aqoonsado, taas oo ah faa iido weyn. Waxaan u adeegsaday sameynta sawirro qaar, sida kartoonkan saaxiibbada qaarkood iyo addoonku: http://img223.imageshack.us/img223/1804/cartoon7nc.jpg
Marka hore waxaan qabaa su'aal:
Kooxdee Adobe Fireworks ka tirsan tahay?
Marka labaad, fekerkeyga:
Waxaan u maleynayaa in waxa GIMP ka maqan tahay in naqshadeeyayaasha garaafka ay si wadajir ah ula horumariyaan barnaamijyada. Inteena badan barnaamijyaasheen runti kama fahmin taas midabyada muuqaalka ah iyo waxyaabo kale oo laxiriira qaabeynta. Xaqiiqda fudud ee aan daabacan karno, waa nagu filan tahay. In kasta oo aan oggolahay inay jiraan qaybo, sida miirayaasha lahaanshahooda iyo inay adag tahay in lagu helo dalab bilaash ah. Shaki la'aan aragti xiiso leh iyo inbadan maxaa yeelay waxaa laga arkaa dhinaca kale.
rashka kuma dhacayso mid ka mid ah saddexda koox ee aan hore u soo sheegay tan iyo markaas, in kasta oo ay isticmaali karaan naqshadeeyayaasha garaafka, haddana waa barnaamij loogu talagalay horumarinta bogagga shabakadda.
Marka laga hadlayo aragtidaada, waa hagaag, waxaan kuu sheegayaa inaan horay u soo diray horumariyeyaasha GIMP taxane ah oo soo jeedin ah, hase yeeshee dhibaatadu waxay tahay in horumarinta ee GIMP waa mid gaabis ah oo umuuqda mid muuqaal ahaan diirada saaraya -daaqadaha qalabka sabeynta si loogu daro hal daaqad leh goobta shaqada- ka badan shaqeyn.
Sidoo kale haddii ay fiicnaan lahayd haddii ay abuuraan mashiinadooda wax lagu qoro ee ICC -http://es.wikipedia.org/wiki/Perfil_ICC#Est.C3.A1ndares_de_facto- maaddaama sida aad arki doontid arrinta ay keligeed gacanta ku heyso Adobe.
Waxa xun ee ku saabsan mashaariicda bilaashka ah ayaa ah in barnaamijyayaashu u qaataan hiwaayad ahaan. Sababtaas awgeed, horumarka gaabiska ah, in kastoo mararka qaarkood ay umuuqato in uusan jirin.
Wixii aan ka arko Apple iyo Adobe waxay wadaagaan keega heerarka. Waa inaad aragto riixitaanka AMD ilaa GIMP, sida nvidia ay ku sameyso Adobe. Laakiin taasi waa sheeko kale.
Salaan iyo wanaag inaad tallooyinka u dhaafto kooxda GIMP. Waxaan rajeyneynaa inay jireen intaas in ka badan oo ay diiradda saari doonaan qodobbada daciifka ah ee aad sheegayso.
Aad u fiican maqaalkaaga. Waxaan la wadaagayaa fikradahaaga qaar iyo doodaha aad soo bandhigto waxay u muuqdaan kuwo macquul ah oo si fiican loo soo sara kiciyey. Laakiin falanqaynta oo dhan waxay had iyo jeer sheegtaa (marka lagu daro ujeeddooyinka) qaybaha iyo shuruudaha qeexaya habka su'aasha loo dhigayo.
Waxa aan tegayo ayaa ah inay jirto wado kale, oo ku wajahan arintan, oo aan xiisaynayo; waana waxa soo socda:
Xaalada isgaarsiinta muuqaalka ah (ujeedooyin xirfadeed ama aan aheyn), codsiyada ama barnaamijyada loogu talagalay sameynta iyo tafatirka waxyaabaha muuqaalka dhijitaalka ah (sida Gimp ama Photoshop, kuwo kale oo badan) waa qalab ama habab farsamo oo la heli karo, iyo sidoo kale kaamiro, maqas, midabbo, saxan raajo, burush, iwm. Si kale haddii loo dhigo, waa qalab loo isticmaali karo, maahan oo kaliya laakiin sidoo kale sharaxaadda iyo dib-u-abuurka shaqooyinka ama alaabada muuqaalka ah.
Dareenkaas, qalab kasta wuxuu noqon karaa mid ku habboon (ama xitaa lagama maarmaan ah), oo la bixin karo (ama aan loo baahnayn) iyadoo ku xiran ujeeddooyinka in la gaaro.
Dhinaca kale, waxaa jira baaxadda wax soo saarka, taas oo ah, xaaladaha aqoonsiga isticmaalaha iyo macnaha guud ee uu u adeegsanayo aaladaha (naqshadeeye muuqaal, farshaxan muuqaal leh, qof doonaya inuu dib u hagaajiyo sawir, iwm. ).
Si aanan faallooyinkaan mar dambe u bixin, waxaan dhihi karaa, marka laga eego aragtidan, waxay noqonaysaa macno la'aan in loo maleeyo in Gimp ama Photoshop ay "ka xirfad badan yihiin" ama "uga habboon yihiin naqshadeeyayaasha garaafka" kan kale. Hagaag, sida maqas ama burush, iyagu waa aalad waxa muhiimka ahna ay tahay in laga faa'iideysto mid kasta waqtiga saxda ah.
Aynu ka fikirno boodhadh xayaysiis ah ama sawir dijitaal ah oo aan u aragno wax weyn. Aynu ka fikirno qaar badan oo ka mid ah oo ah astaamaha isgaarsiinta dhijitaalka ah ee muuqaalka ah, aan ka fikirno naqshadaha garaafka ee ugu wanaagsan ee aan soo aragnay, muxuu been abuurnimadooda, xirfaddooda ama waxtarkoodu been u sheegayaa? Waxaan u maleynayaa inaysan ku xirneyn Photoshop ama Gimp, waxaanan u maleynayaa in badankood, midkoodna labaduba ay yihiin qalab badan.
Marka miyaanay ahayn inaad isbarbar dhigto? Dabcan. laakiin maaha nooca isticmaalaha isticmaali kara, laakiin waa awooddooda iyo xaddidooda sida ku cad shuruudaha farsamo iyo shaqo.
- Shaqadaadu waa macaantahay. Waxay leedahay tayo.
Waxaan u maleynayaa inay weli jiraan qoraalo hadhay.
Kaliya taas. Ka saaristooda ayaa qumman.
Imbaraadooriyadii Austria Joseph II
- Oo imisa qoraalo ayaad u malaynaysaa inay hadhay, Boqorow?
Hola Saddex iyo toban:
Marka hore, waxaan rabaa in aan kaaga mahadceliyo faalladaada, taas oo aan ka fahmi karo in aan ku heshiinno waxyaabaha qaar oo aannaan kuwa kale ku heshiin.
Tuduc kaa mid ah ayaa soo jiitay dareenkeyga:
“Aynu ka fikirno boodh ama muuqaal dijitaal ah oo aan u aragno wax weyn. Aynu ka fikirno qaar badan oo ka mid ah oo ah astaamaha isgaarsiinta dhijitaalka ah ee muuqaalka ah, aan ka fikirno naqshadaha garaafka ee ugu wanaagsan ee aan soo aragnay, muxuu been abuurnimadooda, xirfaddooda ama waxtarkoodu been u sheegayaa? Uma maleynayo inay kuxirantahay Photoshop ama Gimp, waxaana u maleynayaa in badankood, labada midkoodna waa aalado hadhay. "
Marka hore waxaan rabaa in aan cadeeyo laba shay: tan hore ayaa ah in dhaliisha aan sameyn doono ay qeyb ka tahay jahliga aan ka qabo khibradaada naqshadeeye qaabdhismeed. Ta labaad ayaa ah inaan galiyay "geesinimo" qaybta aan aadka u xiisaynayo oo aanan ku raacsanayn.
Maxaan u cadeeyaa labadaas shay? Dhinaca kale, maxaa yeelay qof kaliya oo sannado khibrad u leh -Ana waxaan kahadlayaa looooooooooooooooooooooooooooooooo- isticmaalka GIMP y Photoshop waxaad ku dhiiran kartaa weedh sidan oo kale ah, markaa su'aasha loo baahan yahay waa: iyadoo lagu saleynayo khibradaada -maaha waxa laguu sheegay ama waxaad meel kale ka akhrisay- Maxaa hadhay GIMP y Photoshop?
Hadda waxaan xoojinaynaa qodobbada qaarkood:
1.-In kasta oo tusaalihii aan siiyay, hannaanka hal-abuurnimo ee sawirka (http://es.wikipedia.org/wiki/Ilustraci%C3%B3n_%28arte%29) oo leh qaabeynta naqshadeyntahttp://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_gr%C3%A1fico).
2.-Qalabka loo adeegsaday labada xaaladood ayaa si isku mid ah u noqon kara, waana ku celinayaa, waxay ansax u yihiin labada xaaladoodba haddii, iyo haddii oo keliya, soo bandhigidda ugu dambaysa ay noqonayso taranka dhijitaalka ah, laakiin kuwa la daabacayo iyadoo la adeegsanayo analog had iyo jeer ma shaqeeyo.
Waa salaaman tahay Tina. Waan ku qanacsanahay jawaabta faalladayda. Waxaan jeclaan lahaa inaan ku caddeeyo isbarbardhigga in, sida José II ka duwan, aanan u tixgelinaynin inuu wax "qoraal" ah ku siinayo falanqaynta aad samaysay, maadaama ay aniga ila tahay in si wanaagsan loo qabtay oo ay waafaqsan tahay shuruudaha milicsiga inaad soo jeediso. Faalladaydu waxay ujeeddadeedu ahayd inaan muujiyo qaab kale oo suurtagal ah oo su'aasha la iigu soo bandhigi karo, iyo inaanan u arkin wax ka sii fiican ama ka xun nafteeda, oo aan aad uga yarayn, kaliya ka duwan. Xaqiiqdii, waa macquul inaan khaldanahay ama taas, sida aad tilmaantay, xukunnadayda waa halis.
Anigu ma ihi naqshadeeye garaaf ah, howlahayga xirfadeed waxay kuxiran yihiin cilmu-nafsiga iyo falsafada (arrimaha caqliga, anshaxa iyo sharraxaadda), laakiin sanado badan waxaan u hibeeyay qayb ka mid ah noloshayda, farxad iyo qirasho, abuurista iyo qadarinta farshaxanka muuqaalka; waana sababtaas darteed, waxaan danaystay barashada adeegsiga aaladaha garaafka dhijitaalka ah sida Photoshop, corel, gimp, iwm.
Waxaad u maleyn kartaa in maadaama aanan aheyn naqshadeeye qaabeysan, ma haysto sababo ku filan oo aan go'aan uga gaaro mowduuca, waana laga yaabaa inay sidaas tahay. Laakiin waxaan ku adkeysanayaa, falanqaynta oo dhan waxaa lagu qeexaa halbeegyo tan aan adeegsadayna waa xirfadda, farshaxanka ama qiimaha wax ku oolka ahi kuma xirna aaladda lafteeda, laakiin fulinta ujeeddooyinka. Haddii aan rabno inaan isbarbar dhigno laba maqas, waa inaan sidaas yeelnaa sababo la xiriira darafyadooda, baaxaddooda, ama sahlanaanta maaraynta, iwm. Laakiin xirfad-u-heliddu waxay ku jirtaa geeddi-socodka, fikirka iyo natiijada shaqada ama badeecada.
Haddana waxaan kaaga jawaabayaa su'aashaada. Marka loo eego waayo-aragnimadayda, muuqaalka ugu fiican ee dhijitaalka ahi wuu shaqeeyaa oo aan arkay (taas oo ay ugu wacan tahay shaqadooda ama dabeecadda qurxinta) labadaba Gimp iyo Photoshop waxay leeyihiin hawlihii lagama maarmaanka u ahaa in lagu guuleysto iyada oo aan loo baahnayn in la isticmaalo dhammaan fursadaha ay waxay bixiyaan laba barnaamij, waana taas, marka loo eego dareenkaas, ayuu yiri wuxuu ku hadhay. Qalabyada waa la barbardhigi karaa, marka laga eego dhinacyo badan oo aragti ah, laakiin hanadku wuxuu ku jiraa isticmaalka saxda ah ee qalabka la heli karo si loo helo natiijada la doonayo. Ma aha aaladda shaqada ka dhigaysa, haddii aysan ahayn farsamada lagu isticmaalo. Kaliya maahan shaqada macallinka, laakiin macnaha iyo jihada loo dhiibo shaqada.
LOL! Laakiin maxaa warwareeg ah, labadeenuba waxaan keennaa shumac!
Mahadsanid kun Saddex iyo toban wixii faallooyinkaaga ah.
Mar labaad ayaan ku soo xiganayaa oo waxaan si geesinimo leh u gelin doonaa wixii aan u arko inay khuseeyaan:
«Marka la eego waayo-aragnimadayda, shaqooyinka ugu fiican ee sawirada dhijitaalka ah in aan sameeyay iyo in aan arkay (shaqadiisa ama dabeecad ahaan bilicdeeda) Gimp iyo Photoshop labaduba waxay leeyihiin hawlihii lagama maarmaanka u ahaa inay ku guuleystaan ​​iyada oo aan laga faa'iideysan dhammaan fursadaha ay labadan barnaamij bixiyaan, waana taas, macnahaas, ayaa sheegay in ay ku hadheen. "
Gabi ahaanba waan ku raacsanahay, xaqiiqda dhabta ah waxay la mid tahay sida aan ugu doodayo gabagabada maqaalka ugu weyn:
"… Hubaal GIMP waa qalab weyn oo loogu talagalay kuwa horumarinaya shaqada ujeeddadooduna noqonayso taranka dhijitaalka ah, laakiin kuwa la daabacayo iyadoo la adeegsanayo nidaamyo analog ah had iyo jeer ma shaqeynayo. "
In kasta oo habab kaladuwan, dhismaheenna ay isku mid ka yihiin asalka isla markaana aad isugu egyihiin qaab ahaanna gabagabadayadu waa isku mid macnaha labada barnaamijba ay si fiican ugu habboon yihiin sameynta sawirro dhijitaal ah oo xitaa la daabaco iyadoo la adeegsanayo wax soo saarkeedu waa dijitaal., tusaale ahaan daabacadaha inkjet.
Dhinaca kale, inta badan waxaan la kulmaa a "hanad" sawir maahan macquul in la daabaco iyadoo la adeegsanayo nidaamyada analogga ah -saffset, flexo ama rotogravure-Ma ahan dhibaatooyinka hal abuurka, laakiin maxaa yeelay GIMP ma lahan qalabkii lagama maarmaanka u ahaa. Xaaladdan oo kale ayay ku jirtaa, si kasta oo aad xirfad u leedahay, ma fulin kartid ujeeddooyinka.
Ka faa'iideysiga tusaalahaaga ayaa la mid ah isku day inaad sameyso manicure goyn aad u wanaagsan leh iyo maqas tolid.
Waa salaaman tahay Tina. Hagaag, waxaan kaliya kuugu mahadcelin karaa, markale, inaad la wadaagto aqoontaada maqaalka iyo ra'yi celinta aad siisay faallooyinkayga.
Fikradayda waligeed kama soo horjeedin taada, laakiin shuruudaha midkasta wuxuu xooga saaray dhinacyo kala duwan oo isla shay ah milicsiga. Waxaad diirada saartay muhiimada fursadaha aaladaha iyadoo loo eegayo ujeedooyin gaar ah, waxaana kaliya oo aan doonayay inaan muujiyo muhiimada wakiilka adeegsanaya iyo qiimaha (bilicsanaanta ama shaqeynta) natiijada. Taasi waa in la yiraahdo, maqasyada "dhar-sameynta" runti kuma haboona manicure, laakiin gacmaha manicurist wanaagsan, waxaa laga yaabaa inay leeyihiin natiijo ka wanaagsan tan ay heleen gacmo-yari xirfad yar ama hal-abuur leh iyagoo adeegsanaya maqas gacan ku sameys ah.
Waxaan rajeynayaa inaad sii wadi doonto inaad la wadaagto aqoontaada, milicsigaaga iyo dhaqankaaga wada hadalka (sida ixtiraamka leh maadaama ay tahay wax lagu qoslo) qormooyinka mustaqbalka.
Waa salaaman tahay Tina. Marka hore, waxaan aad u jeclaa akhrinta faallooyinkaaga qoraalada aad halkaan kuqorto. Laakiin hadda, akhrinta maqaalkaaga, waa inaan dhahaa… Waan jeclaaday! Waxyaabaha wanaagsan ee Elav iyo kuwa kale ayaa kuu oggolaaday inaad ka mid noqoto kooxda Desdellinux. Qoraalkaagu waa hagaagsan yahay, nidaamsan yahay, fikradahaagu si fiican ayey isugu xiran yihiin, qoraalka oo dhami waa mid isku xidhan. Waxaan rajeynayaa inaan sii wado aqrinta inbadan oo maqaaladaada ah. !! hanbalyo !! Salaan iyo ilaa waqtiga xiga.
Aad baad ugu mahadsantahay ereyadaada, aad ayaan ugu faraxsanahay inaad jeceshahay waxaanan rajaynayaa inaan halkaan sii joogo mudo dheer.
Waxaan kuu noqon doonaa FanBoy haddii aad wax ka qabato mawduucyo badan oo GIMP ah. Salaan iyo sanad wanaagsan oo wanaagsan!
Waad ku mahadsan tahay kun, waa hagaag, aniga ahaan waxay ii noqon laheyd wax lagu farxo ... haddii kuwa jaray koodhka balooggan ay i oggolaadaan, waxaan abuuri doonaa casharro aan ku isticmaalo GIMP.
Miyaad ku raacsan tahay mid ku saabsan sida midabka si sax ah loogu hagaajiyo?
Kuwii koodhka jaray ... ok sug, aan weydiiyo iyaga ... LOL !!!
DAACAD waad samayn kartaa iyaga, in ka badan ayaa jirtay ... tabaruc kasta oo aad sameyso si aad ah baa loo soo dhaweyn doonaa, shaqooyinkaaga shaki kuma jiro inay aad u fiican yihiin 🙂
Fikrad fiican haddii laguu oggolaado qayb ku saabsan GIMP waana fiicnaan laheyd in lagu bilaabo mowduucyada "fudud" sida midabada . Salaan iyo nasiib wacan 😉
Waxaan abuurayaa qayb cusub hadda ~ » GIMP
Qeybta hoose Sawirada / Tafatirka / Sawirada